အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရေမွှေးပုလင်းနှင့်တူသော ယောက်ျားများ
64 Responses to “ရေမွှေးပုလင်းနှင့်တူသော ယောက်ျားများ”
ကျနော်ကတော့ ...... အင်း.........ဘယ်သူ့အတွက်မှန်းမသိသေးတဲ့ရေမွှေးလေးပါ....ဟဲဟဲ...
ကျွန်တော့်ကတော့ ရေမွှေးဖြစ်မယ်မထင်ပါး) မြောင်းပုတ်ရေ ဟဟး)း)
စဉ်းစဉ်းစားစား ရေးတတ်လိုက်တာ ..
စဉ်းစားဦးမှ ကိုယ့် ရေမွှေးနာမည် :D
:) good to read.
အခုအချိန်ထိတော့ Eternity ပေါ့ဗျာ... နောက်များတော့ မပြောတတ် :)
ရေမွေးလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့ နွဲ့ သွားတာ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ
အောက်ဆုံးကျမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လောဘကြီးတာတော့ဟုတ်ပါဖူးး)
အင်း ရေမွှေးနဲ့ တူသော ယောက်ကျားများ ညီမ ချော အတွက် အကောင်းဆုံး ရေမွှေးလေး ဆွတ်ခွင့် ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်
အပြေးအလွှားလေးလာရှာမိပါတယ်..။ ဟွန့်...တစ်ပုလင်းမှလည်း မပါဘူး..။
ငါ့နှယ်... သိချင်လိုက်တာ....။ :)
July 27, 2010 at 7:40 PM
ရေးသားပုံလေးက ညက်လိုက်တာ ... ဖတ်လို့ကောင်းသလို ဆွဲဆောင်မှုလဲရှိတဲ့ မောဒန်ဆန်ဆန်ဝတ္တုလေးလို့ ပြောရမလား ...။ နှင်း လဲ အဲလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးချင်မိတယ် ....။
ဂျူးလိယက်ကတော့ ဖတ်ရင်း ဂျူးလိယက် အမျိုးသားက ဘယ်ရေမွှေးနဲ့ တူသလဲ စဉ်းစားနေတာ.. ဟီးဟီး Pleasure ရေမွှေးနဲ့ တူမယ်တဲ့ တူတယ်.. :)
ရေမွှေးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရေးသွားတာ တကယ့်ကို ဖတ်ကောင်းတယ်။ ချောကတော့ တကယ်တော်တယ်။
အင်း ... ရေမွှေးဆိုတော့ကာ.. အိမ်မှာ ရှိနေတာ ဘာရေမွှေးဖြစ်မလဲ။ ဘုရားပေးတဲ့ ရေမွှေးတစ်ပုလင်း ပိုင်ဆိုင်နေပေမယ့် တခါမှ နာမည်ကို မတွေးဖူးဘူး။ ပြန်ရောက်မှ သေချာဆန်းစစ် မွှေးပြီး ပြန်လာပြောမယ် နော်း))
Eternity အတွက် ပေးထားတဲ့ နာမည်က သက်ဝေ ပါနေလို့..
ကိုယ်က Eternity ရေမွှေး စပေါ်ကထဲက (မှတ်မိသလောက် ၁၉၉၅ ခုနှစ်) ခုချိန်ထိ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ကြိုက်နေ၊ သုံးနေသေးတာ...း))
ရေးထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေး မိုက်တယ်...
ငါ့အစ်မလည်း Eternity ရေမွှေးလေးကိုသာ ထာဝရဆွတ်ခွင့်ရပါစေ.....
July 28, 2010 at 1:46 AM
ရေမွှေး အမျိုးအမည်လေးတွေတော့ တော်တော်စုံသွားတာပဲနော်.. တစ်ခုမှ လည်း သိဝူး.... (ရေမွှေး မသုံးလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်)
ဒါပေမယ့် ဖတ်လို့တော့ အရမ်းကောင်းတယ်.. . တကယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ အကြောင်းရေးထားတာ မှတ်နေတာ....
အော်...ငါ့အစ်မကတော့ဟေ ရေမွှေးတွေရောင်းနေပါပေါ့ :) စတာနော် အစ်မ ကောင်းလိုက်တဲ့ ရေးအဖွဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းပါ၏ ။
၀ါး... မိုက်တယ်ဗျာ...း)).. ဖတ်ရတာ သွက်ပြီးတော့ကို ကောင်းနေတာ...း))
ကိုယ့်ဘာသာ ဘယ်ရေမွေး နဲ့တူသလဲ ဆိုတာလဲ ပြောတတ်ပါဘူးဗျာ...
တစ်ယောက်တစ်မျိုး သတ်မှတ်ကြလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ သေချာတာတော့ အမျိုးအစား တူမှာ မဟုတ်ဘူး။
စာလေးဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ မမ။ မယ်က Estée Lauder Pleasure ကို သုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာလို မဟုတ်ဘူး :P Eternity ဖြစ်သင့်တာ :P
ချစ်သူဝယ်ပေးမယ့် ရေမွှေးပဲ စွတ်တော့မယ်..
အိမ်ကျမှ ဘာရေမွှေးလဲလို့ ရှုကြည့်ရဦးမယ်.... ဟီး ရေးထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးကောင်းလိုက်တာ... မမချောတို့ကတော့နော် ဘယ်တော့မှ လက်ရည်မကျသွားဘူး တော်ချက်...
မမတို့တော့ သိပ်ရေးတတ်တယ်နော်.. မမလည်း Eternity ရေမွှေးလေး ဆွတ်ရပါစေ...
ဟဲ .. ညီမလည်း.....
ကျွန်မလည်း ရေမွှေးကြိုက်တယ်။ အမျိုးစုံပြောင်းတယ်လေ။ ပို့စ်ထဲကလို တင်စားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ရှုတ်ကုန်မှာစိုးလို့။ (နောက်တာ အဟဲ)။
ီအခုလောလောဆယ်တော့ tommy hilfiger ရဲ့ tommy summer ၂၀၀၉ထုတ် ပေါ့။
ကြော်ငြာထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ နေ့စဉ်ဘ၀ကနေ ခဏအပြင်ထွက်ရတဲ့ စိတ်ကြည်နူးမှု ရစေမယ်တဲ့။
ချိုမြိ်န်ရနံ့ ကြယ်၂ပွင့်။ လတ်ဆတ်မှု ရနံ့ ကြယ်၎ပွင့်။ ညို့ဓါတ်ရနံ့ ကြယ်၁ပွင့်။ စူးရှရနံ့ ကြယ်၁ပွင့် အမှတ်ရထားတယ် ဆိုတဲ့ အတိုင်းကောင်းတယ်။
ပို့စ်လေးကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ ရေးတတ်တယ်။ သင်းပျံ့တယ်။
ကြည်သာသက်ဝေ အဲ့.. ချော အတွက် link လေးနဲ့ ရေမွှေးလေး လက်ဆောင်ထားသွားတယ်နော်... အိုင်ဒီယာလေးနဲ့ အရေးအသားကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး မပြောခဲ့တော့ပါဖူး ဘရာဗိုပေါ့း))))))
ရေမွေးနဲ့ အိုင်ဒီယာကို သဘောကြသွားတယ်၊ တော်သေးတာပေါ့ ၆ယောက်ထဲရှိလို့ Secret ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ့ဘူးတယ်၊ နောက်ဆုံး BVLGARI ကိုပြောင်းကြိုက်သွားတယ်၊
ကျွန်တော်က တော့ ဂျေပါဗျာ..... သယ်ရင်းတို့ ရေ.... ဂျေမဖြစ်အောင်နေပါဗျာ.. ကောင်းဘူး..... ရေမွှေး... ရေမွှေး.....
July 29, 2010 at 4:48 AM
ကြည်သာသက်ဝေက အမငယ်နာမည်လား အမ။းဝ)
ရေးတတ်လိုက်တာ။ ကြံကြံဖန်ဖန်။ ရေမွှေးပုလင်းတွေတောင် မနေရတော့ဘူး။
အစ်မနဲ့ တွေ့မှ ယောက်ျားတွေလဲ ရေမွှေးပုလင်း ဖြစ်ကုန်ပါပြီဗျာ။
ဒါပေမဲ့ ဖတ်လို့တော့ ကောင်းတယ်။
အဲဒါတွေမကြိုက်တာဟေ့ ပေါက်လား ၊ မိန်းခလေးတွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ရေမွေးဘယ်မတုန်း အကြည့်ကိုက
မိန်းခလေးဘက်ကဘဲလိုက်နေတယ် ၊ သမာဓိနဲတယ် အခုအသစ်ရေးတင်ပေး ယောကျာင်္းလေးတွေအတွက်
ရေမွှေးလေး တပုလင်းလောက်တော့ ရချင်သား...း)
Now, I know well what u want.
အဟမ်းးး အဟမ်းးးးး တော်ပါကွယ်
အပျိုဂျီးရေ အပျိုဂျ၊ီးလဲ ဘယ်ရေမွှေးဆွတ်ချင်သလဲ ဟိဟိ
မီး က တော့ ငယ်သေးတော့ ပေါင်ဒါပဲ သုံးဦးမယ်နော် သိလား ခွီးးးးးးးးးးးးးး
ဘယ်မှမရောက်ဖြစ်ပါဘူး မချောရယ် ဦးလူထွေးဆီတောင် ရန်ဖြစ်နေလို့ ရောက်ဖြစ်တာ နောက်ဆို ဝက်ကို လာစေချင်ရင် ရန်ဖြစ်နော် သိလား ဟိဟိ
မအားဘူးကွယ် ရှူတင်တွေ သိပ်များနေတယ် ဟက်ဟက်
Wanna be an "Eternity"..
But i myself can be considered as "Secret.."
Ok, and double yes !
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ရင်ထဲတစ်မျိုးလေး ခံစားရတယ်ဗျာ.. မိုးပွင့်ဖြူလေးကို သနားတယ်.. စင်သီယာပြည့်စုံ အကြောင်း ဖတ်ရတော့ တနေရာက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် အမှတ်ရမိသေးတယ်.. ညိုလဲ့ရီကတော့ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀လေးကိုရသွားမယ်ထင်တယ်.. ကြည်သာသက်ဝေကတော့ ခိခိ.. အပျိုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်.. :P
လင့်ပျောက်သွားလို့ ပြန်လာယူတာ အမခင်ဗျား ပျော်ရွှင်ပါစေ
ချောရယ့့့် 
ရေးတတ်လိုက်တာ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ကို တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် မျိုးစုံကို ခံစားလိုက်ရတာ။ ရေမွှေးပုလင်းလေးတွေကလည်း လှမှလှ၊ နာမည်လေးတွေကလည်း စုံလို့နော်။
စာလာဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ကော်မန့်တစ်ခါမှ မရေးဖြစ်ဘူး.. ဒီဝတ္ထုလေးတော့ တော်တော်သဘောကျမိတယ်..
အစ်မ စိတ်ကူးကောင်းတာကို ချီးကျူးမိပါတယ်..
တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် ရေးတတ်ပါပေတယ်။
July 31, 2010 at 3:14 AM
ကျွန်တော်နဲ့ခပ်စင်စင်တူတာ တွေ့တော့တွေ့ထားတယ် Secret လို့ထင်တာပဲ
888 poker said...
Very nice picture on this blogs. Very good article and blog, poker is good to !
အဲ့ဒီ အဲ့ဒီ ရေမွှေးတွေလေး စိတ်ကုန်သွားပြီ တော်ပြီဘာရေမွှေးမှထပ်မဆွတ်ချင်တော့ဘူး။ ဟူး.....
Eternity.... I like & want it....:)
I,espically, miss my friends coz one of my friends wroteastory like this... But u are so good coz u imagine the men like perfume....And the girls from this look like as us.. I think u chase after us & wrote it... Just kidding ,ma.. Thanks u naw...Be healthy & good luck....
Apple Of Adam said...
ကျနော် လာဖတ်သွားတယ်။ရေမွှေးဆို စိတ်ဝင်စားလို့။ကျနော် ကတော့ beyond paradise ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က အမြဲတမ်းကောင်းတာရော မကောင်းတာရောလုပ်တော့ နတ်ပြည်ကို လွန်ပြီး ငရဲပြည်ရောက်သွားလို့။
ဟဲဟဲ အလကားနောက်တာ။ ကျနော်အကြိုက်ဆုံး beyond paradise ရေမွှေးကိုကြိုက်လို့...
မချောရေ ကိုးကတော့ Poison ပဲဖြစ်ချင်တယ် Dior ကိုကြိုက်လို့.. အခု ရေမွှေးတွေထဲက Pleasure တစ်ပုလင်း လောက် လက်ဆောင်ရလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလည်းဟိဟိ
ကောင်မလေးပေးတဲ့ ရေမွှေးတစ်ပုလင်းတော့ ရဖူးတယ်။ Lorea`l ကထုတ်တဲ့ Kerasys သနပ်ခါးနံ့လေးနဲ့ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးနဲ့ ပြန်သွားပြီ ခွိခွိ
စိတ်ကူးအသစ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီနေ့ အလည်ရောက်ခဲ့တယ်။အားပေးပါတယ်။ရေမွှေးဆို အမပေးဘူးတဲ့
ရေမွှေးဘဲရဘူးသေးတယ်။ ချစ်သူမိန်းခလေးကပေးမယ့် ရေမွှေးကို မမျှော်တော့ပါဘူး။
အတွေးကလည်း ကောင်းပ မမချောရယ်...
ရေမွှေးဆိုရင်တော့ အကုန်ကြိုက်တယ် ..ဟက်
ရေမွှေးဆို တစ်ခါစွတ်လိုက်တာနဲ့ ကို ရနံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ ထုံအီနေတဲ့ တစ်ခါရှုရှိုက်ပြီးရင် ထပ်ကါ ထပ်ကါ တမ်းတနေချင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့ ရေမွှေးမျိူးကိုသဘောကျတယ်ဗျ။ ပြင်သစ်က နာမည်ကြီး ဂျွန်ပထရစ်ဂရောင်းနေးလ် ထုတ်တဲ့ရေမွှေးဆို မမချောက ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲခင်ဗျ မောင်လေးက အမရဲ့ စိတ်ကူးကို တကယ်သဘောကျပါတယ်။ အမရေးတဲ့ စာတော်တော်များများလည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
ကျတော်က ရေမွှေး မသုံးဖူးလို့ မသိဘူး ပေါင်ဒါ ပဲ သုံးတယ် ခုထိ ခုမှ မမချော ရေးတော့မှ ပဲ ရေမွှေးသုံးချင်လာပြီ အဲ့ဒီရေမွှေး ၆ မျိုးစလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် ဘာရေမွှေးထွက်လာမလဲ မသိဘူးနော် ပြီးတော့ ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲနော် :)